युवतीहरु आकर्षित गर्ने तरिका यस्तोपो रहेछ !!!! – News Nepali Dainik
युवतीहरु आकर्षित गर्ने तरिका यस्तोपो रहेछ !!!!
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १३, २०७७ समय: १९:३०:२२
*#*#प्रेममा आर्कषण महत्वपुर्ण हुन्छ । आफूले मन पराएको मान्छेलाई आफूप्रती आर्कषित गर्ने सबैको चाहना हुन्छ । यस्तोमा मन पराएकि युवतीलाई कसरी आफूप्रती आर्कषित गर्ने धेरै युवामा दोधार रहने गरेको छ । यसकालागि केही टिप्स अपनाउन सकिन्छ । तर कसरी ?
***)कसैलाई आफूप्रती आर्कषित गर्ने अर्को महत्वपुर्ण कुरा हो स्मार्टनेस । कुनै पनि युवती केवल स्मार्ट युवकप्रती मात्र आर्कषित हुन्छन् । यसकालागी बौद्धिकता, व्यवहार र प्रस्तुती राम्रो बनाउन आवश्यक हुन्छ । स्मार्ट मानिसले जो कोहिलाई प्रभावित पार्न सक्छन् ।
****) तपाईं कुनै युवतीलाई मन पराउनु हुन्छ भने लगातार उसको पछाडीमात्र नलाग्नुहोस् । उसलाई आफ्नो प्रेम दर्शाउन मायालाग्दो देखिने वा दुखी बन्ने काम भुलेर पनि नगर्नुहोस् । यसको सट्टा तपाईं आफ्नो जीवनशैली यति आर्कषित र लोभलाग्दो बनाउनुहोस् कि युवती स्वत: तपाईप्रति आकर्षित हुन सकुन् ।
*****) तपाईं आफ्नो इच्छा वा शौखलाई उसंग मिलाउनु खोज्नुहोस् । उसको चाहाना के छ वा उसलाई के मनपर्छ त्यसमा विशेष ध्यान दिनुहोस् । उसको मनपर्ने रंग, खाना, वस्तु लगायतका बिषयमा जानकारी राख्नुहोस् र उसलाई आफ्नो शौखको बारेमा पनि बताउनुहोस् । यसले तपाईहरुलाई जोड्ने काम गर्छ ।
Last Updated on: January 26th, 2021 at 7:30 pm
३७०० पटक हेरिएको